Ungaziguqula njani iiDesimali zenze amaqhezu
Ukuguqula iidesimali zibe ngamaqhezu akukho nzima. Ukuguqula idesimali ibe liqhezu, ubeka amanani kwi kunene yenqaku lokugqibela kwinani elingaphezulu (ngaphezulu komgca wamaqhezu). Emva koko ubeka inani eli-1 kwinani elingezantsi, uze udibanise ii-zeroes ezininzi njengamanani enamanani. Nciphisa iqhezu xa kufuneka njalo.
Izigqibo azikho ngaphezulu kwamaqhezu azukisiweyo. Bakhethe ngokukodwa ngenxa yokuba iidinomineyitha zabo zisoloko zili-10, 100, 1000, njalo njalo- amandla ali-10. Bukela apho ikhoyo idesimali ibekwe kwinani. Inani leendawo zokugqibela ukuya kwi kunene yenqaku lokugqibela libonisa inani lamaqanda kumandla ali-10 abhalwe kwinani elingaphezulu.
Umzekelo: Guqula i-3.025 ibe liqhezu.
yintoni lipitor esetyenziselwa
Jonga ukuba likho inani ngaphambili (ngasekhohlo) kwedesimali.
Ukuba likhona, eli nani linani elipheleleyo leqhezu. Ke, 3 lilonke inani.
Beka inani eliwayo emva (ngasekunene kwe) idesimali kwinani elingumanani; emva koko sebenzisa ukubekwa kwedesimali ukumisela idinomineyitha.
Beka inani elingu-1 kwinani elingezantsi, uze udibanise amanani angaphezulu ko-manani njengamanani.
UKUYA idijithi Naliphi na inani elinye ukusuka ku-0 kuye ku-9.
Jonga ukuguqulwa kwedesimali ukuya kwiqhezu kule mizekelo ilandelayo:
.3 unedijithi enye (3) ekunene kwenqaku lokugqibela, ngoko ke .3 iba liqhezu
408 unamanani amathathu (408) ngasekunene kwenqaku lokugqibela, ngoko ke .408 iba liqhezu
pinki kunye emnyama capsule a45
60,0003 inamanani amane (0003) ngasekunene kwenqaku lokugqibela, kodwa ikwanenani eliwela phambi kwedesimali, eliba lelo nani lonke leqhezu. Ke i-60.0003 iba sisiqwengana
Ngaba i-naproxen ikhuselekile ngexesha lokukhulelwa
uxinzelelo lwegazi oluphezulu inqanaba 2
Kutheni ukunciphisa umzimba kunzima kangaka
indlela yokusebenzisa i-transistor
umyalezo wangasese kwi-twitter